काठमान्डाैं : श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डेका अनुसार फोक्सोको सबभन्दा गह्रौं भाग हाम्रो पछिल्तिर हुन्छ । त्यसैले उत्तानो पारेर राख्दा बिरामीलाई पर्याप्त अ
अ’क्सिजनतान्न कठिन हुन्छ भने घोप्टो पार्दा अक्सि’जनको प्रवाह बढ्न गई फोक्सोका विभिन्न भाग सक्रिय हुन पाउँछ । यस्तै गिलासको पानीको सहायताले पनि अ’क्सिजनको मात्रा बढाउन सकिन्छ । डा. पाण्डेका अनुसार यसका लागि सुरुमा गिलासमा पानी राख्नुपर्छ र मुखमा बाहिरको हावा भर्नुपर्छ ।
त्यसपछि गिलासको पानीमा विस्तारै मुखको हावा छोड्ने गर्दा अक्सिजनको मात्रा बढाउन सकिन्छ । यता कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुस’न्धान तथा तालिम केन्द्रका अनु’सन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशीले वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भइसकेका श्वास’प्रश्वास विधि घरमा आइसो’लेसनमा बसेका सबैले अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “शरीरमा अक्सि’जनको मात्रा ९४ भन्दा बढी हुनुपर्छ । यसका लागि अनुलोम विलोम पनि एउटा उपाय हुन्छ । ” अनुलोम विलोममा पलेँटी कसेर मेरुद’ण्ड सीधा पारेर बसेपछि नाकका दुई प्वालमध्ये एकबाट हावा लिएर दोस्रोबाट छोड्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
प्लास्टिक झोलाको माध्यमबाट पनि श्वास’प्रश्वासमा सजिलो हुन्छ । उनी भन्छन्, “प्ला’स्टिकको झोला फुक्ने र श्वास लिने गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । ” को’रोना सङ्क्र’मण भएपछि शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नहुने जानकारी दिँदै उनले पानीको मात्रा पुगे फो’क्सोलाई अ’क्सिजन लिन सजिलो हुने वैज्ञानिक आधार रहेको बताए ।
डा. जोशीका अनुसार झोलिलो खानेकुरा धेरै खाने, टुसा उम्रिएको चनाको झोल बनाएर खाने, ज्वानोको झोल, कुरिलोको झोल, मासुको झोल बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले पनि अ’क्सिजन आपू’र्तिका लागि घोप्टो परेर सुत्न सल्लाह दिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
२०७८ बैशाख २३, बिहीबार ११:२९ गते 1 Minute 979 Views